Windows7ULTIMATE SP1 ALL EDITIONS 32-64 bit ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
နည်းပညာစာအုပ် ၁၀၄ အုပ်
အင်တာနက်သုံး လိပ်စာ စာအုပ်
Facebook hacking စာအုပ်
windows7တင်နည်း
Window Xp တင်နည်း
ဇင်ကို ၏ နည်းပညာမှတ်စုမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
Windows7ULTIMATE SP1 ALL EDITIONS 32-64 bit
12:06:00 am Windows ခွေ No comments
ကျွန်တော်တခြားနေရာတွေကိုလည်းလိုက်ရှာ မနေရအောင်နဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် တိုက်ရိုက်ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ Window7SP 1 မှာ တစ်ခွေထဲနဲ့ကို 32/64 အပြင် Windows7Starter 32-bit, Windows7Home Basic 32/64-bit, Windows7Home Premium 32/64-bit,Windows7Professional 32/64-bit,Windows7Enterprise 32/64-bit ,Windows7Ultimate 32/64-bit ဆိုပြီးပါဝင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ classic DVD5 disc နဲ့ Burn ရင် အခွေမှာကိုက်ညီပါတယ်။ အများစု DVD အခွေတွေက မကိုက်ပါဘူး။ သေချာလေးကြည့်ပေးပါ။ ပြီးတော့ Activated Version လေးဖြစ်ပါတယ်။ Serial မလိုပါဘူး။ တစ်ခါတည်း Crack ချိုးပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ သူ့ရဲ့ Home Page ကတော့ ဒီလင့်ခ်လေးကနေ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4.22 G ရှိပါတယ်။ လင့်ခ်လေးတွေ မသေခင်လေး ယူပေးထားပါဗျာ။
ကျွန်တော် အဆင်ပြေ အောင် File sonic ကနေပြီးတော့ တိုက်ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Premium Accounts တွေကိုတော့ ဒီနေရာလေးမှာ ယူလိုက်ပါ။ လိုအပ်တဲ့သူများ အမြန်ယူပေးထားပါဗျာ။
Downloading from mediafire Part ( 1 )
Downloading from mediafire Part (2)
Downloading from mediafire Part (3)
Downloading from mediafire Part (4)
Downloading from mediafire Part (5)
Downloading from mediafire Part (6)
Downloading from mediafire Part (7)
Downloading from mediafire Part ( 8 )
Downloading from mediafire Part (9)
Downloading from mediafire Part ( 10 )
Downloading from mediafire Part ( 11 )
Downloading from mediafire Part ( 12 )
Downloading from mediafire Part ( 13 )
Downloading from mediafire Part ( 14 )
Downloading from mediafire Part ( 15 )
Downloading from mediafire Part ( 16 )
Downloading from mediafire Part ( 17 )
Downloading from mediafire Part ( 18 )
Downloading from mediafire Part ( 19 )
Downloading from mediafire Part ( 20 )
Downloading from mediafire Part ( 21 )
Downloading from mediafire Part ( 22 )
Downloading from mediafire Part ( 23 )
Password : www.getindianstuff.com
http://wunthozinko.blogspot.com အားပေးသူအားလုံး နေကောင်းပါစေ ရည်းစားနဲ့ အဆင်ပြေပါစေ zinko740@gmail.com
၀န်းသို (စော်ဘွားမြေ) ဇင်ကို
မင်္ဂလာပါ အားပေးလာသူအားလုံး နေကောင်းပါစေ
1GBကတ်ကို 2GB အဖြင့် (1)
2013 ရဲ့ အကောင်းဆုံး Antivirus Software ၁၀ မျိုး (1)
Adobe Photoshop 7.0 (1)
Andriod Phone Pattern Lock (1)
Android application စာအုပ် (1)
CD/DVD Driver ပြောက်နေရင် (2)
Clock for Blog (1)
Copy ကူးတာ မြန်ဖို့ (2)
desktop အလှဆင်ဖို့ (1)
facebook အသုံးပြုနည်း (1)
Folder Lock (2)
Foldr Lock (1)
Format ချနည်း (2)
Gmail အသုံးပြုနည်း (2)
hacking များလေ့လာရန်လင့် (1)
Laptop Battery သက်တန်းရှည်စေဖို့ (1)
Laptop မှာ Wifi အလုပ်မလုပ်တဲ့ပြဿနာ (1)
Launcher 8 (1)
Menu Button တစ်ခုကို ပြုလုပ်နည်း(2) (1)
Pattern Lock ဖျက်နည်း (2)
Pattern Lock ဖြည်နည်း (1)
USB ဆိုင်ရာ (9)
Virs ရေးသားနည်း (1)
Window7Genuine ပြဿနာ (1)
Window XP (2)
Windows ခွေ (13)
ကွန်ပျူတာ လိမ်ရောင်းနည်း (1)
ကွန်ပျူတာကို USB ဖြင့် Lock ချ (1)
ဆိုဒ်များ link ချိတ်နည်း (1)
ဓာတ်ပုံ နည်းပညာ (1)
ပိဋကတ်သုံးပုံ မြန်မာပြန် (1)
ဖုန်းမှာ Lock မေ့သွားသူများ (1)
မင်းသား မင်းသ္မီး ဖုန်းဆိုလား (1)
မင်းသား မင်းသ္မီး အကာင့် (1)
မိန်းမတို့၏ ညို့ချက် (၈)ချက် (1)
မြန်မာ ဂျာနယ် ဒေါင်းရန် (1)
ရည်းစားစာ ရေးနည်း (1)
အင်တာနက် အဆ ၂၀ မြန်အောင် (1)
Blog Address အဟောင်းမှ လိပ်စာအသစ်သို့ Redirect လုပ်နည်း (1)
Blog ပိုင်ရှင်များအတွက် Facebook like box ထည့်နည်း (1)
Blog မှာ Marquee Code များ ထည့်နည်း (1)
Blog မှာ Right click ပေးလို့မရအောင် ပြုလုပ်နည်း (1)
blog မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် လုပ်နည်း (1)
Blog မှာ နာရီထည့် (1)
blog အလှဆင် (1)
Blogger များအတွက် Comments ဒီဇိုင်းအလန်းလေး (1)
Blogger သတင်း (1)
blogမှာ ပို့ခေါင်းစဉ် လန်းလန်းလေးထားနည်း (1)
C-Box ဖရီးလုပ်နိုင်သော ဆိုဒ် (၁၀) ခု (1)
Download Link ချိတ်နည်း (၃)မျိုး (1)
Link စာကြောင်းကို အလှဆင်ပေးသည့် ကုဒ်များ။ (1)
Menu Button တစ်ခုကို လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နည်း(၁) (1)
ning site အလှဆင်cssကုတ်များ (1)
read more လုပ်နည်း (1)
Scroll Bar Widget ပြုလုပ်နည်း (1)
Social sharing widget (1)
WordPress ဆိုဒ်အစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနည်း (1)
ကုတ် အတိုလေးတွေပါ (1)
ပို့စ်ခေါက်နည်း အလွယ်ကူဆုံးလေးပါ (၂) (1)
ဘလော့ တန်ပလိပ်ပြောင်းနည်း (1)
ဘလော့ နည်းပညာများ (1)
ဘလောက် မှာ နှင်းပွင့် တွေ ကျတဲ့ ကုတ် (1)
ဘလော့မှာ ငှက်ပျံနေတာလေး ထည့်လိုက (1)
ဘလော့မှာ စည်းလုံးခြင်းသံစဉ် ပါ ထည့်ဖို့ ကုတ် (1)
အခမဲ့ ဝက်ဆိုက် ရေးတင်နည်း (1)
Facebook hacking စာအုပ် (1)
Window Xp တင်နည်း (1)
windows7တင်နည်း (2)
နည်းပညာ (E-Book) ပေါင်း(20) (1)
ပုံတော်စုံ ငါးရာ့ငါးဆယ် အနှစ်ချုပ် (1)
ဘာသာရေး စာအုပ်တွေအများကြီးပဲဗျာ..... (1)
မြန်မာလို PDF စာအုပ်များ ၁၀၄ အုပ် (1)
အင်တာနက်သုံး လိပ်စာ စာအုပ် (1)
ပီမိုးနင်း - ကာမသိဒ္ဓိကျမ်း
ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ်ကျမ်း
ပီမိုးနင်း - အပျိုလမ်းညွှန်
အချစ်ဟာ ဆေးဝါး တစ်မျိုးပါ
၁ Iphone တစ်လုံးကို Unlock ပြုလုပ်နည်း ၂ Laptop များနှင့် ကခုန်ခြင်း ၃ Photoshop Cs5အသုံးပြုနည်း ၄ websites ပြုလုပ...
About Deepfreeze (194.8KB) (Download mediafire) Acrobat (5.18MB) (Download mediafire) Adobe PhotoShop - Web Designer Guide (...
http://www.imagehousing.com/photo/2 (ပုံအလှလေးများ) http://winkkk.com/glitters__page_3.html%20 (ပုံအလှလေးများ) http://glitter-graphics.com...
Epson T60 Resetter သုံးနည်း
Epson T60 အတွက် resetter တောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သုံးနည်းကတော့ လွယ်ပါ တယ်။ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြ...
Android ဖုန်း အတွက်အသုံးဝင်သော Apk Market များ(ဖုန်းဆော့ဝဲ)များ
အာကာရဲ့ဘလော့ဆိုဒ်လေးသို့ရောက်လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ် အာကာဒီတစ်တော့ Andr...
How to unlock an Android tablet pc using command line prompt !!! Command prompt နဲ့ Pattern lock ဖြေနည်း
Tablet PC တွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Pattern lock မမှတ်မိသူများအတွက် PC ကနေ Command prompt ကိုသုံးပြီး Pattern lock ဖြေနည်းကိုတင်...
PC for Internet Speed Hack 6.1 အင်တာနက် မြန်နှုန်းမြင့်
ကဲ ဒါလေးရအောင် အတော်ရှာထားရတယ် Internet Speed Hack 10.0 က မရတတ်တော့ဘူးဗျာ ဒါလေး တောင် တစ်ဆိုက်မှာ ရခဲ့တာ အတော်များများက ဖျက်ခ...
လေ့လာချင်သူ အတွက် Website များ
ဘာသာရေးဆိုဒ်များ သစ္စာအလင်း အရှင်ဝိစိတ္တ(မနာပဒါယီ) ဒဿနခရီး အရှင်ကုသလ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် အဖြူရောင်မေတ္တာ စန္ဒာသူရိယ အရှင်ကောဝိဒ(မြိတ်) သစ္စာအလင်း ဝေဇယန္တာကျောင်းတိုက် အရိယာဝါသ ဓမ္မမေတ္တာ ဓမ္မလက်ဆောင် ဓမ္မကုန်းမြေ အလှတရား သစ္စာတရားများ စုဝေးရာ ပြတိုက်ငယ် ဓမ္မစေတီဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) တရားတော်များ ဒေါင်းရန် အရှင်ပညိဿရ တောက်ပကြယ်စင် အရှင်သိရိန္ဒ ပြည်တော်ဦး ယောအသင်း ဓမ္မင်္ဂါ သီတဂူစတား ထေရ၀ါဒလူငယ်များအသင်း ဓမ္မရသ ရွာဦးကျောင်း ကဗျာလက်ဆောင် အလှတရား အလင်းသစ် အနန္တမေတ္တာ ယနေ့ရေးသောတရားတော်များ မိုးကတ်တရားတော် အရှင်ဥတ္တမာနန္ဒ သဘာဝဓမ္မ thisismyanmar သာသနာ့ရောင်ခြည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အိမ် ချစ်သောကမ္ဘာမြေ မွေးရပ်မြေ အညာ သစ္စာရောင်ခြည် ဓမ္မအလင်းရောင် ဓမ္မပဒ ဓမ္မရသ ဓမ္မသုခ သုခရိပ် ဓမ္မလင်းရောင်ခြည် ဓမ္မရိပ် မင်းဝေ တိပိဋကမြန်မာပြန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကကြီးခကွေး ဗုဒ္ဓဟောကြား သူတော်ကောင်းတရား တရားတော်များ လူသားဗုဒ္ဓ ငြိမ်းအေးပျော်ရွှင် မိုးကေ
ဘလော့ဂ်များ သာကီနွယ် သီရိလင်္ကာရောက် မြန်မာ ရဟန်းတော်များ ဘလော့ ပိုစ့်အသစ်များ မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ဘလော့ ယောဟန်အောင် ဘလော့ ငွန်ငယ်မိုး ဘလော့ ဒေါင်းမာန်ဟုန်ဘလော့ ၈၈ရဲ့ နော်မန် ဘလော့ အိုးဝေအောင် ဘလော့ အာဇာနည် ဘလော့ ရဲရင့်ငယ် ဘလော့ ဆွေနိုင် ဘလော့ ဘုန်းကျော် ဘလော့ မန်းကိုကို ဘလော့ ခင်မမမျိုး ဘလော့ လမင်းခင် ဘလော့ ခင်မင်းဇော် ဘလော့ ဘလော့ဆုံဆည်းရာ ဘလော့ မန္တလေးနွေဦး ဘလော့ နစ်နေမန်း ဘလော့ ဒီရေ ဘလော့ ကိုထိုက် ဘလော့ ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ မိုးသီးဇွန်: ဘလော့ ကျေးစေတမန်ဘလော့ ရွှေပြည်သစ်ဘလော့ စေလိုရာဘလော့ မြန်မာ့အလင်းဘလော့ အလင်းသစ်ဘလော့ ပြည်ပ ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံများဘလော့ ပိတောက်မြေဘလော့ အတိုက်အခံတို့ရဲ့ အတိုက်အခံ ဘလော့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ ဧရာဝတီ ဘလော့ မိုးမခ ဘလော့ Simple Views ဘလော့ Co2zenith ဘလော့ NEW GENERATIONS ဘလော့ UNHCR ဘလော့ KING OF THE UNIVERSE ဘလော MM ONLINE WATCH NEWS COLLECTION MM BLOGGER POSTS NEWPOWER of BURMA BEST 100 MYANMAR BLOGS OPPOSITEYES NPNGMyanmarP MYANMAR EXPRESS Voice Of Myanmar Hero Of Myanmar
ပြည်ပမီဒီယာဆိုဒ်များ ဘီဘီစီ ဗွီအိုအေ ဒီဗွီဘီ အာအက်ဖ်အေ အန်အိပ်(ရှ်)ကေ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၀ လူ့အခွင့်အရေး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဂျပန်မှ ပလောင်များ ကရင်သတင်း မွန်သတင်း ရှမ်းသံတော်ဆင့် နေရဉ္ဇရာ လူထုအသံ ရိုးမ(၃) မိုးမခ နေ့သစ် ခေတ်ပြိုင် ဟစ်တိုင် ကန္တာရဧရာဝတီတိုင်းမ် ဟံသာဝတီ ဧရာဝတီ မဇ္ဈိမ ယနေ့မြန်မာ သံလွင် Freedom Nnews Group Fight for Freedom Burma BURMA NEWS INTERNATIONAL
မြန်မာမီဒီယာ ဆိုဒ်များ မြန်မာ မြန်မာဆိုဒ် မြန်မာဓာတ်ပုံ မြန်မာဂျီနီဗာ မြန်မာပထ၀ီ မြို့တော်ပုသိမ် မြတ်မြန်မာ မြန်မာဂျီနီဗာ မြန်မာသတင်း မြန်မာ သတင်းရပ်ဝန်း ရန်ကုန်ဂလိုဘယ် ရတနာပုံ သတင်းစာ ရတနာပုံ ECOVISION ဂျာနယ် THE VOICE ဂျာနယ် ဈေးကွက် ဂျာနယ် ဈေးကွက် ဂျာနယ် အင်တာနက် ဂျာနယ် လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ် ဖိုးဝ စွယ်စုံ ပေါ်ပြူလာ အရိုင်းပန်း ပလန်းနက် ပိတောက်မြေ MYANMAR DAILY PCWORLD MAGAZINE TODAY MAGAZINE TEEN MAGAZINE ပြည်တော်ဦး CEO MAGAZINE ပါမောက္ခ MAGAZINE ရွှေအမြုတေ MAGAZINE SOCCER MYANMAR MRTV-4 MRTV-3 FOREVERSPACE FIRST ELEVEN MTALK PEOPLE ALL-CHANNEL MM DAILY NEWS MYANMAR POST
အသင်းဝင်နိုင်သောဆိုဒ်များ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် ဖူးစာရှင်လေးဆိုဒ် MM-Flashsongsဆိုဒ်အရူးလွယ်အိတ်ဆိုဒ်အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးများဆိုဒ်အင်တာနက်ချစ်သူဆိုဒ်မြန်မာသူငယ်ချင်းများဆိုဒ်မြန်မာချစ်သူဆိုဒ်ဇွဲကပင်ဆိုဒ်Myanmar Networkဆိုဒ်မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ဆိုဒ်ငါးသုံးဆိုဒ်အိပ်မက်သခင်ဆိုဒ်သက်တန့်ချိုရွာဆိုဒ်အချစ်နန်းတော်ဆိုဒ်အသည်းကွဲမြို့တော်ဆိုဒ်အနာဂတ်ကောင်းကင်ဆိုဒ်MMITDဆိုဒ် အိမ်လွမ်းသူဆိုဒ် မြန်မာအွန်လိုင်း ဘလော့ဂါစုစည်းရာ ဒီလူ(တော်ငတွင်းကြီး)ဆိုဒ်အနာဂတ်အိပ်မက်ဆိုဒ်အလင်းကမ္ဘာဆိုဒ်ရွှေမြန်မာဥယျာဉ်ဆိုဒ်ဧဒင်ဥယျာဉ်ဆိုဒ်
မာတီပလိုင်းဥယျာဉ် မြန်မာမာတီပလိုင်းသုံးစွဲသူများအတွက် အထောက်အကူပြု မြန်မာTheme မာတီTheme မာတီTheme စာရေးသူတို့ ဆုံဆည်းရာ(စာပေ) မြန်မာကဗျာ မြန်မာစာအုပ်အညွှန်းများ မြန်မာမာတီပလိုင်းသုံးစွဲသူများအဖွဲ့ မြန်မာဆေးမြီးတိုများအဖွဲ့ ကိုဇောင်း(မာတီနည်းပညာ) အမေ့သား(မာတီနည်းပညာ) ကိုကြည်နိုင်(မာတီTheme) ကိုဇော်(နည်းပညာ) ငြိမ်းစိုးဦး(ကဗျာ) ၀ဿန်မြေ(ကဗျာ) ပန်းတော်ဆက်(ကဗျာ) ကျုံတိုင်းရွာ (စာပေ) နေ၀န်းနီ နှင်းအိပ်မက် ဂျော်ကာလေး မိုးမခ အလွမ်းနှင်းဆီ ဇာလီထွန်း သီဟဇော်ရဲ့ အတွေးပုံရိပ် ထွဏ်းနေသွေး ထားဝယ်သားလေးရဲ့အိမ် ဖူးစာရှင်လေး မြန်မာflashsongs စကိုင်း စိုးထိုက် ကိုမင်းချစ်လေး ကိုနိုင် ဧရာမြေ စိုးမိုးသူ စောနေသွေး အောင်မင်းဦး မြမဟေသီ စိုင်းဖိုးသျှမ်း ရဲကျော်ဖြိုး အရှင်တေဇနိယ မမ ကိုတိုးကြီး ကောင်းမြတ်သူ မေဇူး ဝေလင်းအောင် မင်းမင်း မြတ်မွန် myooom romanticrock mmmaung politenesskid. Du ko မာတီTheme
ဘ၀ ဆိုတာ ဖရောင်းတိုင်လေးလိုပဲ၊ မကြာခင် ငြိမ်းသွားမှာ မငြိမ်းခင်မှာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလင်းရောင်းပေးပါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့ လောင်မြိုက် မပြစ်ပါနဲ့။ ငြိမ်းသွားရင်လည်း အနွေးဓါတ်လေးကျန်နေအောင် ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါ
Copyright 2012 ဇင်ကို(နည်းပညာ) မူပိုင်http://wunthozinko.blogspot.com
ဇင်ကို2012 တွင် စတင်တည်ထောင်ပြီး - နည်းပညာများကို - ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါသည်။
sharepoint document workspace